Dyslexia (စာရေးစာဖတ်ခက်ခဲသောရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Dyslexia (စာရေးစာဖတ်ခက်ခဲသောရောဂါ)
Dyslexia (စာရေးစာဖတ်ခက်ခဲသောရောဂါ) ကဘာလဲ။
Dyslexia ဆိုတာ စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်းနှင့် စာလုံးပေါင်းခြင်းများ သင်ကြားရာ၌ အခက်အခဲတွေ့ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ဦးနှောက်ရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းရောဂါဟာ ဉာဏ်ရည်ကိုတော့ ထိခိုက်မှု မရှိပါဘူး။
Dyslexia (စာရေးစာဖတ်ခက်ခဲသောရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Dyslexia ရောဂါဟာ ကလေးအများစုမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စာသင်အရွယ်မရောက်မချင်း ရောဂါ ရှိမှန်းမသိပဲ ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
Dyslexia (စာရေးစာဖတ်ခက်ခဲသောရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Dyslexia ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ စာလုံးပေါင်းရာ၊ စကားပြောရာနှင့် စာဖတ်ရာတွင် နှေးကွေးခြင်း သို့မဟုတ် အခက်အခဲတွေ့ခြင်း၊ ကဗျာ ကာရန်များသင်ကြားရာတွင် သို့မဟုတ် ကဗျာ ကာရန်နဲ့ ဆိုင်သော ဂိမ်းများ ကစားရာတွင် အခက်အခဲတွေ့ခြင်း၊ သူ/ သူမကြားလိုက်သည့် အရာကိုတွေးခေါ်နိုင်စွမ်း၊ မှတ်မိနိုင်စွမ်း နှင့်နားလည်နိုင်စွမ်း ဆိုင်ရာတို့၌ ပြသနာတက်ခြင်း၊ စကားလုံးများ သို့မဟုတ် စာစုများ၏ တူညီချက်များနှင့် ကွဲပြားခြားနားချက်များကို မြင်နိုင်စွမ်း ခက်ခဲခြင်း၊ စကားလုံးအသစ်များကို စာလုံးပေါင်းရာတွင် အခက်အခဲ တွေ့ခြင်း၊ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကား များကို သင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲ တွေ့ခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ကလေးဟာ သင်မျှော်လင့်ထားတာထက် စာဖတ်စွမ်းရည် လျော့ကျ နေမယ်ဆိုရင် သို့မဟုတ် သူ/ သူမဟာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာ ခံစားရလျှင် သင့်ဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်ပါတယ်။ Dyslexia ရောဂါဟာ ကလေးငယ်စဉ်မှာ မသိသာပေမယ့် စာသင်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ ဆက်ပြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Dyslexia (စာရေးစာဖတ်ခက်ခဲသောရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Dyslexiaရောဂါဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်သွေးလျော့နည်းလို့ ဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါမဟုတ်ပါဘူ။ ၎င်းရောဂါဟာ ဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအချို့နဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
၎င်းရောဂါဟာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်သော ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများမှ အမွေဆက်ခံထားတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအချို့ကြောင့် စကားလုံးများ၊ စကားစုများရေးရာဖတ်ရာ စာလုံးပေါင်းရာနှင့် ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကို ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Dyslexia (စာရေးစာဖတ်ခက်ခဲသောရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Dyslexia ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် သင့်မိသားစုမှာ Dyslexia ရောဂါ ရာဇဝင်ရှိခြင်း၊ စာဖတ်နိုင်စွမ်းကို ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းများထိခိုက်ခြင်း စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Dyslexia (စာရေးစာဖတ်ခက်ခဲသောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ကလေးငယ်လေးတွေမှာ Dyslexia ရောဂါ ရှိမရှိ အဖြေရှာအတည်ပြုရန် ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ အမြဲမထင်ရှားနိုင်လို့ပါ။ သင့်ဆရာဝန်က အောက်ပါ မေးခွန်းများကို မေးပြီးအဖြေရှာနိုင်ပါတယ်။
လူနာရဲ့သဘာဝအတိုင်း ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှု ရှိမရှိ၊ ပညာရေးဆိုင်ရာ ရလဒ်များ၊ ရောဂါရာဇဝင်များအကြောင်းနဲ့ မိသားစုဆိုင်ရာ ရောဂါများ အကြောင်းစတာတွေကို မေးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က သင့်ကလေးကို ဘာသာစကားပိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများမေးမြန်းပြီး စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြားပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု များကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
၎င်းတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေတဲ့ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသာနာများနှင့် စိတ်ဖိစီးမှုများ စိုးရိမ်မှုများ စတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများရှိမရှိကို သင့်ကလေးကို မေးပါလိမ့်မယ်။ စာဖတ်ခြင်းနှင့် အခြားဗီဇပါရမီဆိုင်ရာများ ကျွမ်းကျင်မှုများကိုလည်း စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
Dyslexia (စာရေးစာဖတ်ခက်ခဲသောရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Dyslexia ရောဂါဟာအဖြေရှာအတည်ပြုရန် နှင့်လုံးဝပျောက်ကင်း အောင်ကုသဖို့ရာ ခက်ခဲပါတယ်။ သို့သော် အချိန်မီ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးကူညီမှုများ နှင့်ကလေးရဲ့ ကျောင်းသို့မဟုတ် မိဘများက အားပေးကူညီပံ့ပိုးခြင်းဟာ အောင်မြင်မှုကို ပိုရစေနိုင်ပါတယ်။
ကလေး၏ ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အားပေးလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ အကြားအာရုံ၊ အမြင်အာရုံဆိုင်ရာများ ပိုမို တိုးတက်လာစေရန် ဆရာ ဆရာမများက နည်းလမ်းအချို့ကို အသုံးပြုခြင်းစတာတွေကို ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် စာဖတ်စွမ်းရည် ပိုမိုတိုးတက်လာအောင်လည်း ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
စာဖတ်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်က စကားလုံးများကို တည်ဆောက်စေသော သံရင်းများအကြောင်းကို ပိုမို နားလည်ရန် ၊သူ/ သူမပြောသောစကားများကို ကလေးနားလည်ရန်နှင့် စာဖတ်သည့်အခါ ကျယ်လောင်စွာ ဖတ်ပြ၍ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်ပြီး သင့်ကလေးကို သင်ကြားရာ၌ ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။
မိဘများမှ ဂရုစိုက် စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၊ မိဘများက ကလေးရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများကို တတ်နိုင်သမျှ အစောဆုံး လေ့လာတွေ့ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူ/ သူမကို စာဖတ်ရာ၌ အကျယ်ကြီးအော်ဖတ်၍ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ခကြာခဏ စာကို ပို၍ ဖတ်ပေးရန် အားပေးခြင်း စတာတွေပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
Dyslexia. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dyslexia/basics/definition/con- 20021904. Accessed
Dyslexia. http://www.medicinenet.com/dyslexia/article.html. Accessed Jul 14 2016
What is dyslexia? http://dyslexiaassociation.org.au/how-is- dyslexia-evaluated. Accessed Jul 14 2016
Dyslexia. http://kidshealth.org/en/kids/dyslexia.html. Accessed Jul 14 2016Dyslexia. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dyslexia/basics/definition/con- 20021904. Accessed